QRF888 Rafitra valin'ny valiny
Fakan-tsarimihetsika QD3900H1 fandriana mipetaka
Fakan-tsarimihetsika USB QPC20F1 USB
Fakan-tsarimihetsika QPC28 Wireless
QPC80H2 Gooseneck mpijery sary
Rafitra famaliana mpijery QRF300C
Rafitra famaliana mpijery QRF888
QRF997 Rafitra fandraisam-pitenenana kisarisary
Rafitra famaliana mpijery QRF999
Fampitaovana fotsy QWB300-Z
Takelaka fifandraisana amin'ny bundle board
QIT600F2 Manoratra takelaka fifandraisana
Efijery mikasika capacitive QIT600F3
Flow! Miasa pro
Rafitra valin'ny mpihaino QRF888
Ny rafitry ny valin-kafatra fihaonana sy ny efitrano fianarana dia afaka manampy anao handrefy raha miaraka aminao ny mpihaino anao, fa tsy mila mitokana na iza na iza ianao. Instant tatitra. Fidirana ho an'ny mpianatra Auto ID: manohana hatramin'ny lavitra ny mpianatra 60.
1 napetraka ny rafitra valinteny QRF888 misy mpandray 1 lavitra + mpianatra miisa 30
Ity no mpamaky mpihaino tsara indrindra any Qomo miaraka amin'ny sarany ara-toekarena indrindra.
Fanamarihana: Manohana ny marika Qomo izahay ho an'ny demo mandritra ny famokarana betsaka dia ekenay ny OEM / ODM
Remote ho an'ny mpianatra
Famolavolana marefo sy kabinetra amin'ny Iphone x
Fitaovana PC miaro ny tontolo iainana, fahatsapana ho akaiky ergonomika, tsy misy fahasosorana amin'ny hoditra, fizotran'ny famaha aina ho an'ny mpianatra.
Bokotra tsotra amin'ny interface
Fanehoana LCD izay azonao zahana ny safidin'ireo valiny sy ny toeran'ny herinao. Fanalahidy marina na diso, lakilem-pifidianana AF ary bokotra tanana.
Ny base station dia mifandray amin'ny laptop-nao amin'ny alàlan'ny USB ary mahazo angona momba ny latsa-bato avy amin'ny keypad amin'ny alàlan'ny radio; Tsy mila fifandraisana Internet na WiFi. Izy io dia vahaolana kanto, plug ary milalao.
Antenna tarika ivelany misy tarika tsy misy.
Manomeza rindrambaiko fifandraisana maimaim-poana
QVote dia rindrambaiko ifandraisana izay mifanaraka amin'ny rafitry ny valiny QRF888. Izy io dia manana fifanarahana matanjaka, fiasa interface tsotra ary asa maro. Rindrambaiko QVote mikendry ny asan'ny fitantanana ny mpianatra, ny fifanakalozana ao an-dakilasy, ny tombana amin'ny kilasy, ny fanondranana tatitra sns.
Hevitra misongadina etsy ambany:
Tohano ny fisie hanokatra PPT / Sary ary mora ny mamorona efitrano fianarana
Fitaovana marobe ao amin'ny menio Qvote malefaka.
Tohano ny fonosana mena mena (naoty voafaritra isaky ny fonosana mena), fonosana mena vintana (isa naoty) hampifalifaly ny efitrano fianarana.
Ity rindrambaiko ity koa dia manohana ny fanavaozana ny maody Dual-mpampianatra ho an'ny fampianarana lavitra na fivoriana
Karazana fandatsaham-bato marobe
Tatitra eo noho eo miaraka amin'ny karazany hafa ho an'ny fanovozanao. Ohatra Excel, Histogram sns.
Mora ny vaovao farany amin'ny lafiny roa ho an'ny mpampianatra lavitra fomba fampianarana ho an'ny mpianatra rafitra valin'ny
Normal fonosana dia 1 napetraka / baoritra
Afaka mahazo poketra maimaim-poana ianao amin'ny filaharana famokarana betsaka.
Ity kitapom-batsy ity dia mahatonga anao ho mora entina any amin'ireo toerana tianao hanatanterahana ny fampisehoana nataonao.
1 napetraka / baoritra
Ny haben'ny fonosana: 430 * 324 * 195mm
Lanja mavesatra: 3.7kgs
Manaraka: Rafitra famaliana mpijery QRF300C
Teo aloha: Rafitra famaliana mpijery QRF999
Rindrambaiko valiny ho an'ny mpijery
Rafitra famaliana audio
Valiny ho an'ny mpihaino
Rafitra valinteny ho an'ny mpijery
Tahirin-kevitra ara-teknika QRF888
QRF888-mpihaino valiny antsipiriany haingana
Torolàlana ho an'ny mpampiasa QVote
Brochure momba ny valiny ho an'ny mpijery QRF888
QRF997 Rafitra valiny miaraka amin'ny fanekena ny fitenenana